China Steel Support Fittings စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | Zhongming
Luowen ချိန်ညှိနိုင်သောသံမဏိ Prop သည်ဆောက်လုပ်ရေးစနစ်အားဒေါင်လိုက်နှင့်သစ်သားရောင်ခြည်နှင့်ပုံသဏ္supportာန်ကိုထောက်ပံ့ရန်အသုံးပြုသည်။
အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းသံမဏိကျားကန်များသည်တစ်ခုသောကျောက်ပြားပုံစံပုံသဏ္shာန်၏ shoring နှင့်အခြား site လိုအပ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုသည်။ ကြီးမားသောကြာရှည်ခံမှုနှင့်အတူတယ်လီစကုပ်သံမဏိကျားကန်များဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါကျားကန်မော်ဒယ်ပေါ်မူတည်။ , finish ကိုသွပ်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်အမှုန့်ဖြင့်ဖုံးအုပ်, ဆေးသုတ်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်း၏စည်းမျဉ်းများနှင့်ပြုပြင်တာတွေဒီဇိုင်းကိုအမြန်ကျားကန်ညှိနှိုင်းမှုပေးသည်။
သံမဏိကိုယ်ထည်သည်အဓိကအားဖြင့်အောက်ခြေပြား၊ အပြင်ဘက်ပြွန်၊ အတွင်းပိုင်းပြွန်၊ အလှည့်အကျိတ်၊ cotter pin၊ အပေါ်ဘက်နှင့်ခေါက်ထုပ်၏တွဲဖက်ပစ္စည်းများ၊ ခေါင်းအိတ်နှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
သံမဏိကျားကန်သည်ပြင်ပပြွန်နှင့်အတွင်းပိုင်းပြွန်ကြောင့်ချိန်ညှိနိုင်ပြီးအတွင်းပြွန်သည်အပြင်ဘက်ပြွန်တွင်ချဲ့။ ကျုံ့နိုင်သည်။ ထို့နောက်လိုအပ်သောအမြင့်နှင့်အညီချိန်ညှိနိုင်သည်။
သံမဏိကျားကန်ကိုပြန်လည် အသုံးပြု၍ တစ်ချိန်ကအသုံးမဝင်သောပစ္စည်းကိုလည်းပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။
မှတ်ချက် - ပြွန်အထူနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးမျိုးသောထုတ်လုပ်မှုပုံစံများဖြစ်သောဥပမာအထူ ၁.၂ မီလီမီတာ၊ ၁.၈ မီလီမီတာ၊ ၂.၀ မီလီမီတာ၊ ၂.၅ မီလီမီတာ၊ ၃.၀ မီလီမီတာ၊ ၃.၅ မီလီမီတာ၊
1. Cross Cross:
ကျွန်ုပ်တို့ ထပ်မံ၍ အသုံးပြုသောကုန်ကြမ်းအရည်အသွေး၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်ဆိုပါက၊
အာမခံချက် ဤကျားကန်မှုကို UNE 180201. ၏လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်းဒီဇိုင်း လုပ်၍ ထုတ်လုပ်သည်။ ဤစာရွက်စာတမ်းတွင်ဖော်ပြထားသောအချက်အလက်များအားလုံးကိုထောက်ခံသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်ခန်းတွင်အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်း။ မှန်ဘီလူးသံမဏိကျားကန်၏မှန်ကန်သောလည်ပတ်မှု၊ အသုံးပြုမှုနှင့်ကိုင်တွယ်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။ သင်၏မေးမြန်းချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာပါလိမ့်မည်။
Ringlock ငြမ်းကွင်းခတ်, ငြမ်း Adjustable ဝက်အူဂျက်, သတ္တု Cuplock ငြမ်း, အကြီးစား Duty Ringlock ငြမ်း, Ringlock ငြမ်းအစိတ်အပိုင်းများ, Kwikstage ငြမ်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ,